पुटिनका आलोचक नभाल्नीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक ! - सिधा दृष्टी
उपचारमा ध्यान नदिइए जेलमा रहेका रुसी विपक्षी अभियानकर्मी एलेक्सी नभाल्नीको ‘केही दिनभित्र ज्यान जान सक्ने’ उनका चिकित्सकले जानकारी दिएको एपीले जनाएको छ ।
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कटु आलोचक नभाल्नीलाई आर्थिक हिनामिनासम्बन्धी पुराना अभियोगहरूमा गत फेब्रुअरी महिनामा जेल पठाइएको थियो ।
तत्काल नभाल्नीलाई हेर्ने अनुमति माग्दै उनकी निजी चिकित्सक डा. अनास्तासिआ भसिलिएभासहित चारजना चिकित्सकले कारागार अधिकारीहरूलाई पत्र लेख्नुभएको छ ।
नभाल्नीकी श्रीमती युलिआले अमेरिकीसमाचार संस्था एपीलाई दिएको जानकारीमा नभाल्नीले अनशन शुरू गरेयता उनको तौल नौ किलोभन्दा बढी घटेको र हाल ७६ किलोग्राम पुगेको उल्लेख छ ।